Micro Food mezuwo Medical Device mgbapụta DS2504 - DESUN
Miniature brushless DC mgbapụta 1, atụmatụ: Brushless DC mgbapụta eji ụkpụrụ nke na-adịgide adịgide magnet brushless DC moto, tinyere ndị impeller rotor, ụlọ Ọdịdị e mere na-eme ka mmiri mmiri maka centrifugal ije nke uji eze mejupụtara, n'ihi na Ọ dịghị ahịhịa esemokwu, otú ọ dịghị ebua; elu arụmọrụ, ala ike oriri, ahịhịa moto ogologo ndụ, ala mkpọtụ. Jiri ya tụnyere ihe moto DC brushless mgbapụta, brushless DC mgbapụta nwere ndị na-esonụ uru: 1) The mgbapụta aro na-aghọ a mechiri emechi stat ...
Brushless DC mgbapụta eji ụkpụrụ nke na-adịgide adịgide magnet brushless DC moto, tinyere ndị impeller rotor, ụlọ Ọdịdị e mere na-eme ka mmiri mmiri maka centrifugal ije nke uji eze mejupụtara, n'ihi na
Ọ dịghị ahịhịa esemokwu, otú ọ dịghị icheku ọkụ; elu arụmọrụ, ala ike oriri, ahịhịa moto ogologo ndụ, ala mkpọtụ.
Jiri ya tụnyere ihe moto DC brushless mgbapụta, brushless DC mgbapụta nwere ndị na-esonụ uru:
1) The mgbapụta aro na-aghọ a mechiri emechi static akara si ike akara, kpamkpam na-ezere media leakage; ọ pụrụ ịbụ amphibious na n'ụzọ zuru ezu waterproof
2) Ọ dịghị iche iche lubrication na obi jụrụ mmiri, na-ebelata oriri ike
3) Low ike oriri, elu arụmọrụ, damping na damping, na-ebelata mmetụta nke moto vibration na mgbapụta na mmetụta na moto mgbe mgbapụta cavitation vibration
4) bufee na rotor ga ileghara na seramiiki aro, na moto, mgbapụta nchedo
5) Brushless DC mgbapụta iji electronic components maka commutation, na-enweghị iji carbon ahịhịa commutation, ojiji nke elu-arụmọrụ wear na-eguzogide nkenke seramiiki aro na graphite uwe, na uwe site na Ọgwụ na ịkpụzi na magnet ọnụ dị ka a dum ga-ezere eyi na akwa, n'ihi na
Nke a brushless DC magnetik mgbapụta ndụ ukwuu enwekwukwa. Magnetik iche mgbapụta nke stator na rotor kpamkpam dịpụrụ adịpụ stator na sekit osisi nke epoxy potting, 100% waterproof rotor
Part nke na-adịgide adịgide magnet, imipu ahu na environmentally friendly ihe, ala mkpọtụ, obere size, mụ arụmọrụ. Dị iche iche kwa pụrụ ịgbanwe site stator windings ike ejikwara na obosara voltaji.
Uru: ogologo ndụ, ala mkpọtụ ruo 35dB n'okpuru, ike ga-eji maka mmiri ọkụ mgbasa. The stator na sekit osisi akụkụ nke moto na-encapsulated na epoxy kpam kewapụrụ ndị rotor maka mmiri n'okpuru osimiri echichi na zuru nchedo
Mmiri, mmiri mgbapụta aro na elu-arụmọrụ nkenke ígwè aro ma ọ bụ seramiiki aro, elu kpọmkwem, ezi ujo eguzogide.
Food ọkwa Micro-mgbapụta 2504HF
1) obere size, mfe echichi
2) Import PPE ngwaọrụ
3) gụchara graphite biarin, ịgbatị ọrụ ndụ
4) The kacha arụ ọrụ okpomọkụ nke 100 ℃ (nhọrọ)
5) The kacha nta na-arụ ọrụ voltaji bụ 3V, karịa ọrụ voltaji nke 24V, abụọ AA batrị
6) ga-ahaziri dị ka chọrọ nke a dịgasị iche iche nke nchebe (igbochi nchedo / reverse polarity nchedo / mmiri nchedo) epoxy potting, IP68 waterproof fim
7) izute nri-ọkwa chọrọ
model Volts (V) Amps (A) Max eruba (LPM) Max ebuli isi (M) Power (W)
3.flow / isi usoro
Akwarium, ịdị ọcha ike, usekwu na-asa ahụ, mmiri bed, ụkwụ ịhịa aka n'ahụ, soilless cultivation, isi-iyi, ọgwụ ngwá, obere ezinụlọ ngwa, wdg
7.matters akpa ntị
1) Nke a ngwaahịa bụ nke centrifugal mgbapụta, ga-arụnyere na mmiri mmiri n'okpuru ọnọdụ!
2) Ị na-eji mmiri na mba ọzọ ahụ buru ibu karịa 0.35mm ígwé na ahụ.
3) mgbapụta enweghị mmiri mmiri, na-abụghị na-eji! Gbochie rotor si n'usoro na elu na-agba na-emepụta elu okpomọkụ eyi na dọkatụrụ adọka.
4) Mgbe iji na a ala-okpomọkụ na gburugburu ebe obibi, jide n'aka na mmiri mmiri anaghị ifriizi ma ọ bụ na-viscous.
5) Ọ dị mkpa ịhụ ala okpomọkụ ntu oyi awụ ọsọ, iji gbochie oyi mgbapụta esịtidem ice ịkụ.
6) DC brushless mgbapụta kpọmkwem akara nke esịtidem nwechapụ, ọ dịghị ụda, ma ọ bụghị n'ihi na ụba ụzụ na vibration!
Previous: Ezinụlọ ngwa miniature nfuli DS2503
Next: Micro-nri ọkwa ọgwụ na ahụ ike mgbapụta DS3305
Miniature Brushless DC Water mgbapụta
Factory kpọmkwem ire Brushless obere DC mmiri Pu ...
6V ~ 24V 3W ~ 6W> 30000hrs 100degC ogologo ndụ sma ...
24V 5M 9L / min Elu àgwà Long Life Food ọkwa ...
Factory kpọmkwem ire china elu àgwà Food gra ...
6V ~ 24V 3W ~ 6W DC super jụụ ezi mma coolin ...
12V / 24V DC mgbapụta anyanwụ mmiri centrifugal maka med ...